GMMA-80A မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အလိုအလျောက်လမ်းလျှောက်ပန်းကန်ဘီဗဲလ်စက် - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း Taole Machinery
စက် beveling GMMA-80A မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အလိုအလျောက်လမ်းလျှောက်ပန်းကန်
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: GMMA-80A
GMMA-80A စက် beveling အလိုအလျောက်လမ်းလျှောက်ပန်းကန် နှစ်ခုမော်တာနှင့်အတူ
GMMA-80A auto walking ပန်းကန်ဘီဗဲလ်စက်နှစ်ခုမော်တာနှင့်အတူ။ Clamp ထူ 6-80mm ၏ကျယ်ပြန့်အလုပ်လုပ်အကွာအဝေး, ဘီဗဲလ်ကောင်းကင်တမန်သည် 0-60 ဒီဂရီချိန်ညှိခြင်းနှင့် max ကိုဘီဗဲလ်နှင့်အတူ 70mm ရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဂဟေဆော်ပြင်ဆင်မှုအဘို့အဘီဗဲလ် & ကြိတ်လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်း။
မော်ဒယ်အမှတ် GMMA-80A high efficiency auto working plate beveling machine
ဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း 750-1050r / မိနစ်
ဘီဗဲလ်ကောငျးကငျတမနျ 0-60 ဒီဂရီချိန်ညှိ
အလေးချိန် ဘ 245KGS GW 280KGS
ထုပ်ပိုး Size ကို 800 * 690 * 1140mm
2. "Y ကို"0င်ဒီဂရီကြိတ်, ဘီဗဲလ်ပူးတွဲအမျိုးအစားကွဲပြား, "V ကို" ကို process နိုင်သလား
Clamp ထူ 6-80mm နှင့်ဘီဗဲလ်ကောငျးကငျတမနျမြားနှငျ့ 5. Wide အလုပ်လုပ်အကွာအဝေး 0-60 ဒီဂရီချိန်ညှိ
2 မော်တာတွေနဲ့ 7. ပိုမိုတည်ငြိမ်စွမ်းဆောင်ရည်ကို
ယခင်: သတ္တုပြားများအတွက် GMMA-30T စာရေးကိရိယာ beveling စက်
နောက်တစ်ခု: ပန်းကန်ဘီဗဲလ် & ကြိတ်များအတွက် GMMA-V2000 CNC စက်
စက် beveling အလိုအလျောက်လမ်းလျှောက်ပန်းကန်
အကြီးစားပြား Edge Mills စက်
သတ္တုအစွန်း chamfering စက်
သတ္တု Edge groove စက်
Mills စက်ချိန်ညှိရ Angle ပြား
ပန်းကန် chamfering စက်
ပြား Edge Chamferin ဆစက်
အိတ်ဆောင်ပြား Edge Mills စက်
သံမဏိ Edge ဘီဗဲလ်စက်
သံမဏိ Edge Chamfering စက်